အိုဗမာ နှင့် ဗလဒင် OB | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အိုဗမာ နှင့် ဗလဒင် OB
အိုဗမာ နှင့် ဗလဒင် OB
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 8, 2011 in Community & Society, Critic, Cultures, News | 12 comments
အိုစမာဘင်လာဒင် သေတာကို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေမှာ အကြီးအကျယ် တင်ပြနေကြတာမို့ သဂျီး စကားအတိုင်း မှတ်တမ်းကျန်အောင် ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို သွားလေသူကြီးနဲ့ စပ်ဆက်တွေးမိလို့ပါ။ ဘင်လာဒင်ဆိုတာ နယ်နယ်ရရ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းကို အုပ်စိုးတဲ့ အမေရိကား ဧကရာဇ်မင်းကို စိန်ခေါ်ရဲသူပါ။ အမေရိကန်သမိုင်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တို့ အလစ်ဝင်ဗုံးကြဲခဲ့တဲ့ ဟာဝိုင်ရီ ပုလဲဆိပ်ကမ်း အဖြစ်အပျက်ကလွဲရင် တိုင်းတပါးလက်ချက်နဲ့ ကိုယ့်မြေပေါ်မှာ အကစ်ခံလိုက်ရတာ မရှိသလောက် ရှားတယ်။ ဒီအစဉ်အလာကို ဘင်လာဒင်က ပေါ်တင်ကြေငြာပြီး အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး မျက်စိအောက်ကနေ ၉-၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ချိုးဖောက်ပြခဲ့တယ်။ တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင် နှစ်အနည်းငယ်တုန်းက မီဒီယာမှတဆင့် အမေရိကန်တွေကို မင်းတို့လက်နက်နဲ့ မင်းတို့ကို ပြန်သတ်မှာလို့ ကြုံးဝါးထားသလိုပဲ အမေရိကန် လေကြောင်းလိုင်း ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ပျံကြီးများနဲ့ ဝေါထရိတ်စင်တာ၊ အိမ်ဖြူတော်တို့ကို အသေခံ ထိုးစိုက်ဖောက်ခွဲ ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ပိုမိုလေးနက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် ကွဲပြားလှတဲ့ လူ့အဖွဲ့စည်းနှစ်ခု တိုက်မိကြတာပါ။ ကျောင်းတော်က ရန်စကလည်းရှိ ရေနံထွက်ရာ ဒေသလည်းဖြစ်လို့ စိတ်ခံစားမှုရော၊ လက်တွေ့အကျိုးစီးပွားပါ ပေါင်းစုံနေပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်လွန်းလို့ ပြောချင်တာကို ကွက်ပြောရရင် ကမ္ဘာ့ပုလိပ်မင်းကြီး အိုးဘားမားနဲ့ အယ်ကေးဒါး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင်တို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ နောက်ခံပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားကြောင့် ခြားနားလှတဲ့ အတွေးအခေါ် အကျင့်စရိုက်များ ဖြစ်လာပုံကိုပါ။ အိုဘားမားက ရှေ့နေ၊ ဘင်လာဒင်က အင်ဂျင်နီယာ၊ နှစ်ဦးစလုံး ပညာတတ်ဖြစ်ပြီး ဆင်ခြင်တွေးခေါ်နိုင်အောင် လေ့ကျင်သင်ကြား ခံရသူများ ဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူများကတော့ ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ပွင့်လင်း စနစ်ကျတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကြီးပြင်းလာသူက ရုပ်ဝတ္ထု တိုးတက်မှု သာမက ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတွေ၊ မတူတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အတွေးအခေါ်များကို သီးခံပေါင်းသင်းတတ်ဖို့ သင်ယူရတယ်။ အာဏာရှင်၊ ဘာသာရေး အယူအစွဲကြီးပြီး ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းလာသူအတွက်တော့ ချမ်းသာ၊ ပညာတတ်တာတွေဟာ တဇောက်ကန်းဖြစ်ဖို့ တွန်းပို့လိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ အစွမ်းရှိတာခြင်း အတူတူ ရေခံမြေခံလိုက်လို့ နှလုံးရည်နဲ့ လက်ရုံးရည် အားကိုးပုံခြင်း ကွဲပါတယ်။
အိုဘားမားကြီးပြင်းရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ ကျင့်ဝတ် သိက္ခာကို လိုက်နာရတယ်။ လူတဦးချင်းအခွင့်အရေး၊ အချင်းချင်းဆက်ဆံရေး၊ အာဏာလက်ရှိနဲ့ အာဏာလက်မဲ့၊ အုပ်ချုပ်သူနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံများကြားမှ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ စနစ်ရှိတယ်။ ဒီတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်ဖြစ်နေလည်း လက်လွတ်စပယ် ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့။ လွတ်လပ်မှုရဲ့ အသီးအပွင့် လူနဲ့ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းတဲ့ မူ တို့ကို အကျိုးရှိရှိ အပြန်အလှန် အသုံးချပါတယ်။ ဘင်လာဒင်ကတော့ မတူရင် သတ်မယ်၊ ဗုံးခွဲမယ်၊ အံမတုရဲအောင် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ပြမယ်။ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဘယ်အရာမဆို စတေးဖို့၊ အသုံးချဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။ သူကြီးပြင်းရာ အသိုင်းအဝန်းရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ရာနှုန်းပြည့် ယူခဲ့ပါတယ်။ အယ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ကို ကြမ်းတမ်းရက်စက်လွန်းလို့ အချင်းချင်းတောင် ကြောက်ရပါတယ်။ ကြမ်းသလောက် စွမ်းတော့လည်း သူလုပ်သမျှ ဟုတ်လို့နေခဲ့တာ နောက်ဆုံး အမေရိကန်ကျားမြီးကို သွားဆွဲတဲ့အထိဖြစ်ပြီး ဇာတ်သိမ်းမကောင်းခဲ့ပါဘူး။
ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင်မှာ ပြသနာတခုကို ဘက်ပေါင်းဆုံကနေ ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်။ အတိုက်အခံ၊ တတ်သိပညာရှင်၊ အတွေ့အကြုံရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတယ်။ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အများပြည်သူကို ချပြစည်းရုံး၊ အပေးအယူ အလျော့အတင်း လုပ်တယ်။ အစွန်းရောက်တွေကတော့ အင်အားသုံးဖို့ စဉ်းစားတယ်။ ကွဲလွဲမှုမှန်သမျှကို တဖက်သက် နှိပ်ကွပ်ပြီး အများအမြင်မှာ တဦးထဲ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်အောင် ရိုက်သွင်းတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အများကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကိုယ်က လူပေါ်ထဲက လူဇော်လုပ်တဲ့စနစ်နဲ့ အများကို နိမ့်ကျအောင် နှိမ်ထားပြီး မိမိက လူမွဲထဲက လူဂဲလုပ်တဲ့ စနစ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်က ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ် ပုံစံသွင်းပါတယ်။ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းဆိုရင် မှီလိုက်သူ သာမာန်ပြည်သူများအတွက် တကဲ့ကို ဘုန်းရှင်ကံရှင် မင်းတပါးပါ။ ဘင်လာဒင်လိုပဲ နောက်လိုက်ငယ်သား၊ အုပ်ချုပ်ခံတွေကို မျက်စိနားပိတ်ထားပြီး လုပ်ချင်တာကို တရားလက်လွတ် လုပ်ပါတယ်။ လက်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်များလည်း ဝမ်းမန်းရှိုး ကပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ထဲမှာ ကန့်ကွက်သူရှိရင် ဆွဲထုတ်ရိုက်တယ်။ ကြာတော့အပြင်မှာ ပြောင်းလဲနေတာတွေကို မသိ၊ သိလည်း မကြည့်ချင်တော့ဘဲ နွားခြေခွက် ရေအိုင်ထဲက ဖားသူငယ်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျသေဆုံးတဲ့ နဝတအတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကိုတိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ၊ ဝါးရင်းတုတ်သုံး ပြည်သူ့စစ်ဗျူဟာနဲ့ ပင်လယ်ကဝင်လာမဲ့ အမေရိကန် မရိမ်းတပ်ကို ခုခံဖို့စဉ်းစားတာ၊ နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှုကို အရေးမကြီးသလို နေပြခဲ့တာတွေဟာ လက်ရုံးအားကိုး အတွေးအခေါ်တွေက လာတာပါ။
အထက်မှာ ပြောခဲ့တာတွေက အပေါ်ယံကြော နောက်ကြောင်းပြန်ပြောလို့ သိလွယ်မြင်လွယ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ အကွေ့အကောက်တွေ အများကြီးနဲ့ပါ။ ငါတို့လည်း ဘင်လာဒင်တို့လို အစွန်းမရောက်ဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သူတို့နဲ့ မတူတဲ့ အခြားအစွန်းတဖက်မှာ မြန်မာတွေရောက်နေတာ ကြာပါပြီ။ ထစ်ခနဲရှိ လက်နက်အားကိုးဖြေရှင်း၊ အနည်းစုကိုအနိုင်ကျင့်၊ မတူတဲ့အမြင်ဆို နှိပ်ကွပ်၊ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမျိုးသားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးအမြင် အခြေခံတဲ့ စိတ်တွေကို မဖျောက်နိုင်ရင် တနေ့နေတချိန်ချိန်မှာ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်လို၊ ဘင်လာဒင်လို လက်နက်အားကိုး လူမိုက်တိုင်းပြည် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရှိတိုင်း၊ နူကလီးယားဗုံး ထွင်တိုင်း လူမျိုးကြီးတမျိုး ဖြစ်မသွားပါဘူး။ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရရော အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေပါ ပြုပြင်ရကောင်းမှန်း သိမှ မရှိလို့ဆင်းရဲ ဆင်းရဲလို့မရှိ မုန့်လုံးစက္ကူကပ် ဇာတ်လမ်းကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
good creative writing….
တကယ် ကောင်း တဲ့ ပို့စ ပါ ။ အား ပေး ပါတယ် ။
အရမ်းလန်းတယ်ဗျာ၊ တုနှိုင်းစရာ စကားလုံးမရှိလို့ စကားလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင် ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဦးကြောင်ကြီး ဘယ်လိုထင်သလဲ။ မြန်မာပြည် ဒုတိယအာဖဂန်နစ္စတန်ဖြစ်မယ် ထင်သလား။ မြန်မာပြည်ကို အနောက်အုပ်စုက မျက်စိမကျဘူးလို့ ထင်သလား။ အမေရိကန်တွေဟာ သူတို့ထက်ခေါင်းတစ်လုံးပိုမြင့်မယ့်လူကို ကြည့်မရဘူးဗျ။ တချိန်တုန်းကတော့ ဆိုဗီယက်၊ အခုတော့ yellow ။ မြန်မာပြည်ကလေးမှာ အိမ်နီးချင်းကောင်းမရှိဘူး။ ခုတ်မယ့်လှီးမယ့် အိမ်နီးချင်းပဲရှိတယ်။ မြန်မာပြည် ဟာ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ ဓားခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုမိတဲ့ နိုင်ငံ မဖြစ်အောင် ဘာတွေက အရေးကြီးသလဲ။ သင်ကြားစရာတွေများလွန်းလို့ ဘယ်ကနေစမေးရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး။
( လွတ်လပ်ပွင့်လင်း စနစ်ကျတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကြီးပြင်းလာသူက ရုပ်ဝတ္ထု တိုးတက်မှု သာမက ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတွေ၊ မတူတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အတွေးအခေါ်များကို သီးခံပေါင်းသင်းတတ်ဖို့ သင်ယူရတယ်။ အာဏာရှင်၊ ဘာသာရေး အယူအစွဲကြီးပြီး ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းလာသူအတွက်တော့ ချမ်းသာ၊ ပညာတတ်တာတွေဟာ တဇောက်ကန်းဖြစ်ဖို့ တွန်းပို့လိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ် )
ပြောလိုက်ရင်….မိုးပေါ်က မဆင်းဘူး….စက်မှုဇုန်မှာ ဂျစ်ကားထုတ်ပြီး…လက်မထောင်နေကြ..
ဆော်ပစ်မယ်..တီးပစ်မယ်ဆိုပြီး..စစ်အင်အားစုနေကြ…. ပြီးတော့ မွဲနေကြ….
Published: May 8, 2011, 8:36 AM UTC
ISLAMABAD (AP) — As U.S. investigators comb throughatreasure trove of computer data and documents seized from Osama bin Laden’s home, Pakistani officials faceamore domestic task: What to do with three of the slain terrorist leader’s wives and eight of his children.
Pakistan’s foreign ministry said Sunday that government officials were still holding the wives and children for questioning and that so far, no country had sought their extradition.
Pakistan gained custody of bin Laden’s family members on Monday afteracovert U.S. operation killed the al-Qaida chief at his hideout in the northwestern city of Abbottabad.
Among them was bin Laden’s Yemeni-born wife, Amal Ahmed Abdullfattah.
Pakistan foreign ministry spokeswoman Tahmina Janjua said that neither Yemen or any other country had asked for the extradition of bin Laden’s relatives. Pakistani officials, who have not disclosed where the relatives are being held, have said that they will be returned to their countries of origin.
Abdullfattah told interrogators that she had been staying in bin Laden’s hideout since 2006 and never left the upper floors of the large, sparsely furnished building, saidaPakistani intelligence official who spoke on condition of anonymity in line with the agency’s policy.
ကျေးဇူး ဘကြီးပု၊ ကျွန်တော်ရူးသွပ်တဲ့သတင်းတွေမို့ ကျေးဇူးအထူးပါ။
၉-၁၁ ဖြစ်တော့ကျနော်က ၀ါရှင်တန် ဒီစီမှာ
မနက်စောစော မောနင်းရှိုးမှာ လေယဉ်ငယ်တစီး တဖရူတီစီ (WTC) ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ ကို ၀င်တိုက်သွားတယ် လို့ပဲယောင်ဝါးဝါး ကြေငြာသွားတယ်။ တဖြေးဖြေး ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီး အမေရိကန် နိင်ငံ အတိုက်ခံရပါလား ဆိုပြီး သိလာကြပြီး တပြည်လုံး စိုးရိမ်လာမိကြတယ် လေယဉ်အားလုံး. ပြန်သန်းခွင့် ပိတ် နီးရာလေဆိပ်ကိုဆင်းခိုင်း ရတယ် တခြားမြို့တွေနဲ့ မတူတာက အမေရိကန် စစ်ဌါနချုပ်ကို ထိတော့ ကျနော့်အိမ်နဲ့ ၁၀မိုင် သာသာ ပဲဝေးတယ်။ ပင်ဆာဖေးနီးယားမှာ ပျက်ကျ သွားတဲ့ လေယဉ် ၀ါရှင်တန် ကိုလာနေပြီ ဆိုတော့ ကျနော်နေတဲ့ မြို့ကိုလာနေတာ။ အန္တရာယ်ကို မမြင်မိ စိတ်ပါလွန်းတာနဲ့ တီဗီရှေ့ က မခွာနိုင်။
ပိုဆိုးတာက အမေရိကန် ကို အနုမြူဗုံး အကြမ်းတည် (dirty bomb) လို့ ခေါ်တဲ့ အနုမြူရောင် ခြည်ကြွပြီးသား သတ္ထုကို ရိုးရိုးဗုံးနဲ့ ပေါင်းပြီးခွဲရင် နယူးရောက်နဲ့ ၀ါရှင်တန်က ပစ်မှတ်ပဲ။ ဒါကြောင့် ဗုံးပေါက်တာနဲ့ အနုမြူရောင်ခြည်အန္တရယ်က ကင်းလွှတ်ဖို့ အထုပ်အဆင်သင့် ပြင်ထားကြ ရတယ်။
ဒိအတွက်ကြောင့် ဘင်ကြီးကို ခံစားမှုရှိသလားဆို ရှိတယ် လို့ဖြေရမယ်။ နာကျည်းမှုရှိသလားဆို ရင် ရှိတယ်။
ဒါက ခံစားမှု ဖက်ကကြည့်ရင်ပေါ့
ဒါပေမဲ့ တခြားတဖက် ကပြန်ကြည့်ရင် အမေရိကန်လို စူပါ ပါဝါလို နိုင်ငံမျိုးကို စော်ကားရဲတာ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် ရဲတာ နဲတဲ့ သတ္တိမဟုတ်ဖူးလို့ မြင်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော် အစိုးရတိုင်း ဟာ လက်တန်ရှည်တယ်ဆိုတာ သိကြတာပဲ။ ဥပမာ ဂျာမဏီအိုလန်ပစ် ပွဲမှာ အဇ္ဇရေး အားကစား သမားတွေကို ပါလက်စတင်း အကြမ်းဖက်သမား တွေက သတ်ပစ်ကြတော့ အဇ္ဇရေး အစိုးရက အကြမ်းဖက် သမားတွေကို လိုက်သတ်တာ အော်စလိုမှာ လူမှားပြီး စာပွဲထိုးကိုသတ်လိုက်မိသေး တယ်။ ဗူဂေးရား ကလည်း ၁၉၇၈ ခုက အတိုက်ခံတယောက်ကို ရီစင် အဆိပ်လူထားတဲ့ ထီးထိပ်နဲ့ လန်ဒန်မြိုလယ်ခေါင်မှာ ချိပ်မိအောင်လုပ်ပြီး သတ်ခဲ့တာပဲ။ ရုရှားသမ္မတဟောင်း ယနေ့ ၀န်ကြီးချုပ် ပူတင်ရဲ့ ရန်သူဟာ ငါ့ကိုရန်ရှာလိမ့်မယ်ပြောရင်းက ရေဒီယိုအိုင်ဆိုတုတ် အဆိပ်မိပြီး အသတ်ခံလိုက် ရတယ်။ ၉-၁၁ အပြီးမှာ အမေရိကန်တွေလည်း အဲလ်ကိုင်တား (al-Qaida) လူတွေကို ဗြောင်လိုက်ဖမ်း လိုက်သတ်တာပဲ။ ဗမာအစိုးရကလည်း တဆင့်ခံတွေက တဆင့် ဖဒီုမန်းရှာ ကို လုပ်ကြံပစ်တာပဲ။ ဘယ်သူတွေ ဘာတတ်နိုင်လို့လဲ။ ဒါကြောင့် အစိုးရ လက်တန်ရှည်တယ်ပြောကြတာပါ။
အမေရိကန်တွေ လက်စားခြေမယ်ဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ။ ဒါကြောင့် ဘင်ကြီးကို ပေါ့သေးသေး မုန်းတီးစိတ် တခုတည်းနဲ့ မကြည့်ရင် သတ္တိမသေးဖူး လို့ပြောနိုင်တယ်။
တချန်ထဲမှာ စူပါ ပါဝါ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ရှိသမျှ လူအင်အား ငွေအား အတတ်ပညာအား နဲ့ လိုက်ရှာတာတောင် ဘင်ကြီးကို လိုက်ရှာတာ ၁၀ နှစ်ရှာမတွေ့ နိုင်ခဲ့ကြဖူး
ဒါကြောင့် ဘင်ကြီးဟာ လေ့လာသင့်တဲ့ လူထူးလူဆန်း တယောက် လို့မြင်မိတယ်။
အများကတော့ ဘင်ကြီး အကြောင်းကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာဖွေစုဆောင်းကြပြီး သူဌေးသား ဘင်စီနီယာရဲ့ ၅၂ ယောက်သော ခလေးတွေအထဲက ၁၇ ယောက်မြောက် သား အသက် ၅၄ နှစ်ရှိပြီ စသည်ဖြင့် ဘင်လာဒင် ကြောင်းကို ဖေါ်ပြကြ ပါလိမ့်မည်။
စာရေးသူ စိတ်ဝင်စားတာက တခြားထောင့် ကကြည့်တာ
ဘင်လာဒင်ရဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာ မဟာဗျူဟာ အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံ အစီအစဉ် ပလင်ဆွဲပုံ ထောက်လှမ်းရေးရှုထောင့် ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းတွေက ကြည့်ပြီး အတု ယူစရာတွေရှိသလားသိချင်တယ်။ ဘာကြောင့်ဘယ်မှာ တော်တာလည်း ဆိုတာကိုဝေဖန် ပိုင်းခြားသုံးသတ်ချင်တယ်။ ဒီလို သုံးသပ်နိုင်ဖို့ အင်တာနက် က ဖတ်ရုံနဲ့ မလုံလောက် စာတမ်းတွေ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုလေ့လာရမယ် လေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့ စာတမ်းတွေ ကိုလေ့ လာရမယ်။
ပထမဆုံး ထောက်လှမ်းရေး နဲ့ စစ်ဖက် ရှုထောင့်က ကြည့်ရအောင်။ ဘင်လာဒင်ကို အားပေးမှု ကြောင့် အာဖကန်ကို အမေရိကန်က ၀င်တိုက်ပြီး တာလီဘန် တွေကို မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဘင်လာဒင်တို့ရဲ့ အဲလ်ကိုင်းဒါး တွေနောက်ဆုံး တိုရာဗိုရာ လို့ခေါ်တဲ့ တောင်တန်းမှာ ပိတ်မိနေပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဘုဒ်ရဲ့ အလယ်ပိုင်းစစ်ဒေသရဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် တော်မီဖရန့် က လူညံ့ တိုင်းပြည် အကျိုးထက် မိမိ နံမည်မထိခိုက်ရေးကိုပဲ အရေးပေးခဲ့တာကြောင့် ၎င်းလက်ထဲမှာ စစ်သား များများသေတာကို လက်မခံနိုင်။ ဒါကြောင့် ဘင်တို့ကိုရင်ဆိုင် တက်တိုက်ရာမှာ အမေရိကန် စစ်သားတွေမသုံးရ အာဖကန်စစ်ဘုရင်ရဲ့ စစ်သားတွေကိုပဲ သုံးရမည်။ အမေရိကန်စစ်သားတွေက တောင်အောက် က ကူပေးမည်။ အမေရိကန် လေတပ်မှ ဖုံးမိုးရွာလိုက်ရင် ဘင်တို့သေနိုင်တယ်လို့ ပေါ့။ တောင်ပေါ်မှာ စီအိုင်အေ စစ်သားဟောင်းလူတစုပဲရှိကြတယ်။
အာဖကန်စစ် ဘုရင်တွေရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာက ငွေပိုပေးသူ ကိုသစ္စာရှိတယ်။ ဘင်လာဒင်တို့က ဘာလှည့်လိုက်သည်မသိ အာဖကန်စစ်ဘုရင်က ဘင်တို့ကိုမတိုက်တော့ – စီအိုင်အေ အထူးတပ်ဖွဲ့ ကို ဘင်တို့က အသေကြွေးတာ မနဲအလွပ်ရုံးခဲ့ကြရတယ်။ လူတိုင်းတွက်တာက ဘင်လာဒင်တို့
ပါကစ္စတန် ဖက်ကိုကူးပြီးပျောက်သွားကြတယ်ပေါ့။ နောက်မှသိကြရတာက အာဖကန်က ဂျာဂျာ လဖတ် မြို့ကစိတ်ချရတဲ့ အိမ်ကမှတဆင့် အာဖဂန် အရှေ့မြောက်ဒေသရှိ လူခေါင် ဝေးလံသော ကူနာ အရပ်ဒေသကိုထွက်သွားတယ်လို့ တယ်လီဂရပ် သတင်းစာ သမားက ၎င်းးရဲ့ဆောင်းပါးမှာ မကြာခင်က ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ ၀ီကီလိ မှာပါတဲ့ စစ်ချက်ကို ထောက်အထားပြုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒါစစ်ရေးအရ ဘယ်ခြောက်ကာညာလှမ်း မထင်တဲ့ လမ်းကဖေါက်ထွက်ခဲ့တာပဲ။
နောက်တခါ ဘင်လာဒင် ဟာတခါတည်း အစဖျောက်သွားတယ်။ အမေရိကန်တွေဟာ ခေတ်မှီနည်း ပညာတွေမှာ ထူးချွန်တာကြောင့် ဘင်ကြီးဟာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ဘာမှမသုံးတော့ဖူး။ ဆက်သွယ်ရေး အားလုံးကို လူယုံတွေကပဲ တဆင့်ဆက်သွယ်တော့တယ်။ သူနဲ့သူ့ရဲ့နံပတ် (၂) အီဂျစ်လူမျိုးအိုင်မွန် စ၀ါဟီိရီ ayman al-zawahiri တို့ အသက်ရှင်နေသေးကြေင်း လိုရင်လိုသလို ကြေငြာချက်တွေ ဗီဒီရိုတွေ ထုတ်ပြီးကမ္ဘာကို ကြေငြာလေ့ရှိတယ်။
ထောက်လှမ်းရေး အလုပ်မှာ (လှုပ်ရှားမှု) မရှိရင် အသံဖမ်းလို့ မရရင် ဘယ်စီရှိမှန်း ခန့်မှန်းလို့ မရဖူးပေါ့။ ပိုဆိုးတာက ပါကစ္စတန်ရဲ့ အနောက်မြောက်ဒေသဟာ အစိုးရအာဏါသိပ်တည်တာမဟုတ် ကိုယ့်ရပ်ကွက်မှာ လူကြီးတွေက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒေသဖြစ်တယ်။ ဒို့ပြင်ထိုဒေသရဲ့ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာက မိမိဧည့်သည်ဆိုရင် မိမိစောင့်လျောက်ရမယ်။ ဘင်လာဒင်ကငွေသုံးနိုင်ပြီး ဒေသ လူကြီးတွေကို ၀ယ်ယူလိုက်တော့ ဒေသခံတွေရဲ့ ဧည့်သည် ဒေသခံတွေရဲ့ အစောင့်အလျောက်ခံ ဖြစ်သွားတော့ အပြင်လူမ၀င်ရတဲ့ ဒေသကို ဘယ်လိုဝင်ပြီး ဘင်လာဒင်ကို ရှာနိုင်မှာလဲ။
ထို့အပြင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ အိုင်အက်စ်အိုင်(ISI) လို့ခေါ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ က (၂) ဖက် လိမ်စားတဲ့ လူလည်ကြီးအဖွဲ့ဖြစ်နေပြန်တယ်။ တာလီဖန် ဆိုတာ အိုင်အက်စ်အိုင် က ဖွဲ့ပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ အာဖကန်က လက်ရှိသမ္မတ ကာဇိုင်းဟာ ပါကစ္စတန် နဲ့ရန်ဖက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြိယ သြဇာခံလို့ ပါကစ္စတန်ဖက်က ယူဆတယ်။ အမေရိကန်တွေထွက်သွားရင် သုံးဖို့ တာလီဖန်တွေရှိမှကိုး ဒေသတွင်းအင်အားပြိုင်မှုက ပါဝင်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ပါကစ္စတန်က နှစ်ဖက်ကစားတယ်။
အမေရိကန်တွေက ပါကစ္စတန်ထဲ မောင်းသူမဲ့လေယဉ် ဒရုန်းတွေက ဖုံးကြဲလိုရင် အိုင်အက်စ်အိုင်နဲ့ ပါကစ္စတန်က အမေရိကန်သံအမတ်လက်မှတ်ပါမှ ပစ်ခွင့်ရှိတယ်။ အမှန်ကကြိုးနီနဲ့ ပိတ်ထားပြီး အရေးပါတဲ့ သူတို့လူတွေကို အိုင်အက်စ်အိုင်က သတိပေးနိုင်တာကြောင့် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ကြဖူး
သမ္မတဘုဒ်ဟာ သက်တန်းကုန်ခါနီးမှာ စိတ်မရှည်နိုင်တော့တာနဲ့ ဒီကြိုးနီစံနစ်ကို ကျော်စေဖို့ လိုအပ် ရင် ခွင့်မတောင်းပဲ ပစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး လျှို့ဝှက်အမိန့်ပြန်ထမ်းထုတ် ခဲ့တာကြောင့် အမေရိကန် တွေလွပ်လွပ်လပ်လပ် ပစ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြပြီး အဲလ်ကိုင်းဒါး ခေါင်းဆောင်အများအပြားကို ခြေမှုန်း နိုင်ခဲ့တယ်။ သမ္မတ အိုဘားမား လက်ထက်မှာ မောင်းသူမဲ့ ဒရုန်းတွေကို ပိုသုံးလာခဲ့တယ်။
ထောက်လှမ်းရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ဂွင်းဆက် ရှာတတ်ဖို့ လူကိုသုံးပြီး သတင်းယူတယ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ သုံးပြီး သတင်းစုတယ် ဒီရလာတဲ့ သတင်းတွေကို ချိပ်နိုင်ဖို့က အရင် (သုံးသပ်) တတ်ဖို့လို့တယ် ဒီသုံးသပ်ချက်တွေကမှ ထူးခြားချက်တွေကိုရှာ ဒီကမှ ဂွင်းဆက်ကိုမိမှ ပစ်မှတ်တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု လှည့်ကွက် ရွှေ့ကွက် တွေကို ခြေရာခံမိမယ် ဒါမှ ထောင်ဖမ်း မယ် လိုက်ဖမ်း နိုင်မှာပေါ့။ အဆင့်မြင့် ထောက်လှမ်းရေးအတွက် သုံးသပ်ချက်မပါတဲ့ သတင်းသက်သက် ဟာ ဆားမပါတဲ့ ဟင်းလို ပေါ့ ရွှပ်ရွှပ်ကြီးပဲ။
အီရတ်စစ်ပွဲ အရှိန်တက်တဲ့ အချိန်က နံမည်ကျော် အကြမ်းဖက်သမား ဇကာဝီ ကိုဖမ်းလို့ မမိနိုင် တာကြောင့် အမေရိကန်စစ်တပ်က အသုံးမကျဖြစ်လာတယ်။ ဇကာဝီကို ဖမ်းမိဖို့ task force ဖွဲ့ပြီးသဲကြီးမဲကြီး လိုက်ရှာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီရတ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ tribalism လို့ခေါ်တဲ့ အသင်းအုပ်စုစံနစ်က ကြီးဆိုးတုန်းရှိသေးတာကြောင့် သူတို့ အုပ်စုငယ်လေးတွေကို ထိုးဖေါက်ဖို့က ခက်တယ်။ ကျနော်တို့ ကိုလိုနီခေတ်က အဖြူတွေက ဘုရားပေါ်ဘွပ်ဖိနပ်တွေနဲ့တက်တော့ မိမိယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကန့်လန့်ကြီး ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ဒေသခံတွေစီက ဘယ် သတင်း ရနိုင်ပါ့မလဲ။
လူတိုင်းစီမှာ အားနဲချက် ကိုယ်စီတော့ရှိကြစမြဲပဲ။ ဇကာဝီတို့ဟာ ဘာသာရေးအလွန်အကျွံ အကြမ်း ဖက်သမားတွေဆိုတော့ တဖက်ကလူသတ် ရက်စက်နေပေမဲ့ တဖက်ကဘာသာရေးကို လက်မ လွှတ်နိုင်ဖူး ဒါကြောင့် သူယုံတဲ့ ဘာသာရေးဆရာကို တွေ့လေ့ရှိတယ်။ ဒီဘာသာရေး ဆရာ ဘယ်သူဆိုတာ သိတာနဲ့ သူ့ဆီကဆောင့်နေရုံပဲ။ ဇကာဝီ ရောက်လာမှန်းသေခြာတာနဲ့ အက်စ် ၁၆ လေယဉ်ကို ကိုအောဒီနိပ်အတိအကျပေးပြီး ပေါင်၅၀၀ ဗုံး (၂)လုံးကျွေးလိုက်တာ ကိစ္စချောသွားရော။ ဇကာဝီနေရာယူသူတွေရှိပေမဲ့ ခေါင်းဆောင်ချင်းမတူကြဖူး။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဇကာဝီရဲ့အဖွဲ့ဟာ အရေး မပါတော့ဖူး
ဘင်လာဒင်ကြီးကိုကြည့်လျှင်လည်း ခေတ်မှီဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေကို အကုန်ပိတ်ထားရင် ကျန်တာက လူကိုသုံးတဲ့နည်းပဲ ကျန်တော့တာပေါ့။ ဘင်ကြီးယုံတာဘယ်သူလဲဆိုတာ သိရင် ဂွင်းဆက်ရှာရပြီပေါ့။ ဘင်ဟာဥါဏ်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသမား မဟုတ်တာကြောင့်ရယ် ၁၀ နှစ်လုံးလုံး ရှောင်နိုင်ခဲ့တော့ အယုံအကြည် လွန်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ထောက်လှမ်းရေးမှာ ဘယ်တော့မှ ပုံစံဝင်တယ်ဆိုတာမရှိစေရဖူး။ ဥပမာ ဒီလမ်းပဲ နေ့စဉ်သုံးရင် ဒါပုံစံဝင်တာပဲ။ လမ်း ကြောင်းကိုအမြဲပြောင်းနေရမယ်။ ရန်သူမစဉ်းစားနိုင်အောင် တကွက်ကျော်တွေးတဲ့ အကျင့် လုပ်ရ မယ်တဲ့။
အမေရိကန်ထောက်လမ်းရေးတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ကြမ်းမကိုင်နိုင်ဖူး။ ဒါကြောင့် ကိုင်နိုင်တဲ့ ကိုင်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ အကူအညီကို ယူခဲ့တော့ အရှေ့ဥရောပ နိုင်ငံ နှစ်ခုမှာ စစ်ကြောရေး ၀င်တုန်း မှာ ဘင်ကြီးယုံတဲ့လူတယောက်ရဲ့ နံမည်ဝှက်ကို ရလိုက်ကြတယ်။ ပိုကံကောင်းသွားတာက ၂၀၀၅ ခုလောက်မှာ လီဖီ Abu Faraj al-Libbi ဆိုသူကို အိုင်အက်စ်အိုင် က မိလာပြီး အမေရိကန်တွေလက် ထဲထဲ့လိုက်တယ်။ လီဖီက ဆက်သွယ်ရေးသမားလူစာရင်းကို ပေးလိုက်တယ်။ ဒီအထဲမှာ ၉-၁၁ ကိုတည်ထွင်ဖေါ်ထုတ်တဲ့ ခါလစ်ရှိပ်မိုဟာမက်ရဲ့ တပည့်လည်းဖြစ်ပြီး လီဖီရဲ့ လူယုံ တယေက်ကို ဇကာတင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတိထားမိကြတယ်။ ဒါတွေဟာ အချိန်ယူ သုံးသပ်မှု တွေ့လာရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့။ နောက် ၂၀၀၇ မှာမိလာတဲ့ အဆင့်မြင့် လူတယောက်ကလည်း ဒီလူကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးပြန်တယ်။ ခက်တာက နံမည်ရင်းတွေမဟုတ်။ ဒီလူဟာ ကူဝိတ်လူမျိုးဆိုတာပဲသိတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာနဲ့ လူတွေက အမေရိကန် ငပွကြီး စီအိုင်အေ ကိုပဲ သိကြတယ်။ စီအိုင်အေ ထက် ဘတ်ဂျက်ပိုများတာက အင်အက်စ်အေ (NSA) လို့ခေါ်တဲ့ လေလှိုင်းပေါ်မှာရှိတာတွေကို အကုန်နား ထောင်ထဲ့ အေဂျင်စီပဲ။ သူက ဒီစီနဲ့ ဘော်တီမော် အကြားမေရိလန်ပြည်နယ် ဖေါ့မိ (Ft Meade) မှာရှိတယ်။ တခါ အရင်အ အင်အာလ်အို လို့ခေါ်တယ် ဂြိုဟ်ထု တွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ အေဂျီစီ။ အမေရိကန် အေဂျင်စီ ၂၈ ခုဟာ ထောက်လှမ်းရေး နဲ့ဆိုင်တာ။ သူတို့ကို အမှောင်အေဂျင်စီ (Black Agencies) လို့ခေါ်တယ်။ ဘတ်ဂျက် အတိအကျလည်း မထုတ်ဖေါ်ဖူး။ ကွန်ကရက် က လိုအပ်သူတွေပဲ သိခွင့်ရှိတယ်။ ၉-၁၁ အပြီးမှာ အားလုံးတဖွဲ့တစည်းထဲ စုလိုက်ပြီး ဒါရိုက်တာ တယောက်ရဲ့အောက်မှာ စုထားလိုက်တယ်။ ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်က ထောက်လှမ်းရေးအတွက်သုံး တာ ၂၈ ဘီလျံ ၊ ဒေါ်လာ သန်း ၂၈၀၀ ကျော်တယ်။
ဒီ ဘင်လာဒင်ရဲ့ ဆက်သား ဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်မှာ နေတယ် ဆိုတာ ၂၀၀၉ မှာမှ ခြေရာ ခံမိ တယ်။ ဒီလူရဲ့ ကူဝိတ်က မိသားစု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အသိတွေအားလုံးကို မိုးပေါ်ကစောင့်ကြည့် နေကြတာ ၂၀၁၀ ဇူလိုင်လ မှာမှ ပါရှဝါမြို့မှာ သွားတွေ့ပြီး နောက်က နောက်ယောင်ခံကြည့်တော့ အခုတွေ့ရတဲ့ အဲဖေါ့ တာပတ် (Abbottabad) မှာတွေ့ရတော့ အံ့အားသင့်စရာက အလုပ် အကိုင်မရှိတဲ့ ညီအကို နှစ်ယောက်က ဒေါ်လာ တသန်းကျော် အိမ်မှာနေ နိုင်တယ်။ ခြံစည်းရိုး အမြင့်ကြီးတွေဆောက် ထားတယ်။ အမှိုက်တွေကို မပြစ်ဖူး မီးရှို့ပြစ်ကြတယ်။ အိုင်တီခေတ်မှာ တယ်လီဖုံးလိုင်း အင်တာနက် လိုင်း မရှိဖူး စတဲ့ ထူးခြား ချက်ကလေးတွေကို တွေ့ရတဲ့အပြင် ဒီအိမ်ဟာ အဖိုးမြင့်လူတယောက်ကို ၀ှက်ဖို့တည်ဆောက် ထားတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားလာတယ်။
ဘင်လာဒင်သတိရှိတာက တခါမှ အပြင်မထွက်ဖူး။ ဒါကြောင့် ခန့်မှန်းရုံက ပိုပြီးအတိအကျ မပြောနိုင်ဖူး။ ဘင်ကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မှ ဘင်ဖြစ်ကြောင်းသေခြာရတော့တယ်။ ဘင်သတိရှိပေမဲ့ သူ့တပည့်က မသိပဲ ဖုံးကိုင်လိုက်တာ အမေရိကန်တွေ ဘင်ကြီး တံခါးဝ ရောက်လာတယ်။ တကွက်မှားသော ကျားဆိုသလို တချက်မှားတာနဲ့ အသက်ပါသွားတာပဲ။
လူတိုင်းက ဘင်တို့အဖွဲ့ကို ကိုယ်ပိုင်လွပ်လပ်တဲ့ တောင်တန်းဒေသက ဂူကြီးတွေအထဲမှာ ပုံးနေကြ တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ပါကစ္စတန်ရဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်တည်ရှိရာနဲ့ ဂိုက်ငါးရာကျော် ကျော် စစ်မြို့မှာ ဘင်ကြီးက ဇိမ်ကျနေတာကိုး။ ဘင်တို့ရဲ့ တခြားပြဿနာက ပုံးရှောင်နေတာတောင် အမြဲမိန်းမ ငယ်ငယ် မိသားစု တွေကပါရတယ်။ တပြုံတဂေါင်းချည်း။ ဒီအိမ်ဟာ ၂၀၀၅ မှာဆောက်တာ ဆိုတော့ အဲဒီအပြီးကတည်းက နေနေတာလားမသိ။ မထင်တဲ့ နေရာမှာ ရှောင်တာပဲ။ အားလုံးက တောထဲ တောင်ထဲက ဂူတွေမှာ ပုန်းနေတယ်လို အထင် အနောက်မြောက်ဒေသမှာ အပူတပြင်းရှာ နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ဘင်လာဒင်က စစ်တပ်မြို့က အိမ်ကြီးမှာ ဇိမ်နဲ့ ဗြောင်ဗြောင်တင်းတင်း ပုံးနေ တာ။ မထင်တဲ့ နေရာ မရှာမဲ့နေရာမှာ ပုံးနေတာ။ ဒါကိုက လှည့်ကွက်ပဲ။ ဥါဏ်ချင်းပြိုင်ရတာပဲ။
အမေရိကန်တွေကလည်း ဘယ်လောက်အထိ တိကျသလဲဆိုရင် ဘင်တို့ရဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို လေ့လာပြီး ပညာရှင်တွေကတောထဲတောင်ထဲ ရွှေပြောင်း မှုကြောင့် ပင်ပန်း ကြောင့်ကြတဲ့ရုပ်မရှိဖူး လို့သုံးသပ် သူတွေရှိတယ်။
ဘင်လာဒင် တို့တော်တာက အမေရိကန်တွေ အဲလ်ကိုင်းဒါးကို လိုက်ချေမှုန်းပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒေါင်လိုက် အုပ်ချုပ်မှုကနေ ဖရန်ချိုင်း လုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ ဥပမာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်တွေ အများကြီးရှိ ကြတယ်။ ဒီဆိုင်တွေအားလုံးကို မက်ဒေါ်နယ်ကုမ္ပဏီက ပိုင်သည်မဟုတ်။ အကယ်၍ကျနော်က ချင်းမိုင်တနေရာမှာ မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင် ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် မက်ဒေါ်နယ်ကုမ္ပဏီက စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာ ပြီး သူ့ကုမ္ပဏီက မယ်နူးအတိုင်းရောင်းခြရင် သူ့ ကုမ္ပဏီနံမည်ခံကျနော့်ဆိုင် လာဖြစ်တာကို
ဖရန်ချိုင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီရတ်မှာ ဂျော်ဒန်က ဇကာဝီက အဲလ်ကိုင်းဒါး အမည်ခံလိုက် တော့သူအဖွဲ့ အမည်ဟာ အီရတ်မှ အဲလ်ကိုင်းဒါး လာဖြစ်တာပေါ့။ အဲလ်ကိုင်းဒါး အမည်ခံ လိုက် တော့ ပိုပြီးနံမည်ရလာပြီး ၀င်ချင်သူ ပိုများလာတာပေါ့။ ဘင်လာဒင်အဖို့ ကလည်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှာ ငါတို့ ရှိတယ်ပေါ့။ အခုဆို ရီမင်မှာလည်း ရီမင်အဲလ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ က ထကြွသောင်းကြမ်း နေတယ်။ ဆိုမာလီ အဲလ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ ကလည်းရှိသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ သိပ်မထင်ပေါ်သေးတဲ့ ပြဿနာရှိတယ်။ လူကြီးတွေနဲ့ဝေးသွားတော့ သူတို့အထဲက အစွန်းရောက် ရန်-ငါ-စည်း သမားတွေက နဲနဲဆို ရက်ရက်စက်စက်သတ်တော့ လူတွေက ရွံလာ ကြတယ်။ ထောက်ခံမှုကျလာသလို မလိုအပ်ပဲ ရန်သူများလာကြတာပေါ့။ နောက် ခေါင်းဆောင် ကောင်း ဆိုတာ နေ့တိုင်းရှာတွေ့တာမဟုတ်ဖူး။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ အတွေ့အကြုံလိုတယ် သတ္တိ အရည်အချင်းလိုတယ်။ ဒါတွေက မွေးရာပါ။ ဖန်တည်းယူလို့မရ။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်တွေက များများမြန်မြန် ရှင်းနိုင်ရင် ရေရှည်မှာ ပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်။ အဖမ်းခံ အသတ်ခံရတဲ့ နှုန်းက ပြန်ဖြည့်နိုင်တဲ့နှုန်းတက် များနေရင် ထပ်ဖြည့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရည်အသွေးဟာ အရင်လူတွေလောက် မထက်မြက်ရင် ရေရှည်မှာ အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ထိရောက်မှု ကျဆင်းလာတာပဲ။
ဒို့အပြင် ဘင်ကြီးဟာ အကြမ်းဖက် သမားတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်။
နံပတ်နှစ်လူက ဥါဏ်သမား သတ္တိဗျတ္ထိ သေရဲသတ်ရဲတာကြတော့ ဘင်ကြီးကို မမှီ။ ဘင်ကြီးနေရာ ယူနိုင်တဲ့သူ မမြင်မိ။ ရေရှည်မှာပြဿနာရှိတယ်။ အခုမေရိကန်တွေရဲ့ သေနတ်တွေက ဒုတိယလူစီ ချိန်နေကြပြီပေါ့။ ဒါကြောင့်ဘယ်သိပ်လှုပ်နိုင်မှာလဲ။ နောက် ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ဗမာတွေ လို ပဲ ပုဂ္ဂိုရ်ရေး ကိုးကွယ်မှုရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဘင်လာဒင် သေတာဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ အတွက် အဆုံးရဲ့အစ ဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်ဘင်လာဒင်ရဲ့ ထူးခြားချက်တခုက စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးရင် ပထမအကြိမ် မအောင်မြင်ရင်တောင် စိတ်မလျော့သွားဖူး။ အမှားကို သင်္ခမ်းစာယူပြီး တခါထပ်ကြိုးစားပြန်တယ်။ ဥပမာ ၁၉၉၀ နှစ်ဦးပိုင်း တွေလောက်မှာ ယူဆက် ဆိုသူက နယူးရောက်မြို့က ဒီ တဖရူတီစီ (WTC) ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ် ရေးစင်တာ ကိုပဲ မြေအောက်ကားရပ်တဲ့စီမှာ ထရပ်ကားအပြည့် ဓါတ်မြေသြဇာတွေထဲ့ပြီး ဗုံးဖေါက် ခဲ့တယ်။ အမှန်က အောက်ခြေကို ဖြိုရင်ပြိုမယ်ထင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ အဆောက်အဦ ပမာဏ နဲ့ သုံးတဲ့ဗုံး ပမာဏ မမျှတာကို သင်္ခမ်းစာယူပြီး လေယဉ်တွေကို အနုကြမ်းစီးပြီး လေယဉ်လောင်စာ တွေကို ဗုံးအဖြစ် သုံးတာပဲ။ ဒါ ဘင်လားဒင်ရဲ့ (ဇွဲ) ကြီးတာ။ နောက်ဘင်လာဒင်က စိတ်ရှည်တယ်။
ဘင်လာဒင် ရဲ့အားနဲချက်က ဗမာတွေ ရဲ့အဖြစ် နဲ့ တူတာရှိတယ်။
အင်အားစုတာ ထောက်ခံမှုရတာ ရှိပေမဲ့ ဒီထောက်ခံမှုကို ဒီအင်အားက တဆင့် အောင်မြင်မှု ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပုံဖေါ် မလဲ ဆိုတာကြတော့ ဗျူဟာ ပိုင်းမှာ အားနဲတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Idealism စိတ်ကူးယဉ် နိုင်ငံရေး ဆန်သွားတယ်။
ဘင်လာဒင် ရဲ့ရည်မှန်းချက်က အစ္စလမ် ဘာသာ စထွန်းကားစဉ်က နိုင်ငံနယ်နမိတ်မရှိတဲ့ အစ္စလမ် နိုင်ငံကြီး caliphate ကြီးလို စပိန်ကနေ အင်ဒိုနီးရှားအထိ ပြန်ထူထောင်ဖို့။ ရှလီယာ Sharia ဥပဒေ လို့ ခေါ်တဲ့ အစ္စလမ် ဥပဒေ ကိုကျင့်သုံးကြဖို့။
ဒါပေမဲ့ ဘင်လာဒင်တို့ ဘာသာ ကို ယုံကြည်တဲ့ ပုံသဏ္ဍန် အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ဆောင်ပုံ (Interpretation) ကတဖက်စွန်းရောက်တယ်။ ၀ဟာဖီဝါဒ လို့ခေါ်တယ်။ ၁၈ ရာစု နှစ်လောက်က ဆော်ဒီအရေဗီးယား မှာ ၀ါဟတ်ဆိုတဲ့ ဘာသာရေုးပညာရှင် တယောက်ဟာ အစ္စလမ်ဘာသာ ကိုသန့်စင်အောင်လုပ်ရ မယ် ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ပညတ်ချက်တွေကို ဖေါ်ထုတ်လာတယ်။ ဆော့ဘုရင်က ၀ါဟတ်ရဲ့ သမီးကို သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကတည်း Wahhabism လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေးဝါဒဟာ ဆော်ဒီအရေးဗီရားမှာ ကြီးစိုးခဲ့တယ်။ ဘုရင်စံနစ်က ဓါးမိုးထားပြီး ၀ါဟာဖီဝါဒက ဘာသာရေးနဲ့ ထိန်းထားတာ အခုထိပဲ။
တကယ်တော့ ဘာသာရေးဆိုတာက မိမိဘာသာကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်တွေကို မိမိ လိုရာဆွဲတွေး ဆွဲဘာသာပြန် ပုံသဏ္ဍန် အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ဆောင်ကြပြီး ဒါ အမှန်တရား လို့ကျွေးကျော်ကြတာကိုး။ ဘင်တို့ရဲ့ပြဿနာက မိမိရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဓါးမိုးပြီး အတင်းအဓမ္မ ယုံကြည်ခိုင်းတာ။ ဒီမိုကရေစီ
ဒီမိုကရေစီ လို့ကုန်းအော်နေကြတဲ့ ၂၁ ရာစုနှစ်နဲ့ သိပ်သဟဇာတ လာမဖြစ်ဖူး။ အာဖကန်မှာ ကျင့်သုံးလိုက်တာလည်း နံမည်ပျက် အခုဆော်ဒီလည်း ယိုင်တိုင်တိုင် ဘယ်လို တွေးခေါ်မှု ယုံကြည်မှု နဲ့ အနိုင်ယူမယ်ဆိုတာ မသိဖူး။ လောလောဆယ် အကြမ်းဖက်ပြီး လူစုတုန်း အခြေမှုန်း ခံရဖို့များ တယ်။
ဘာသာရေးမှာပဲ လုံးဝအုပ်သုံအမှန်တရား Absolute Truth ဆိုတာရှိတာကိုး။ ဒါ့အပြင် ငါ့ပြန်ဆိုချက်ကမှ အမှန်ဆိုတော့မခက်ဖူးလား။ ပိုကြောက်စရာကောင်းတာက မင်းတို့မနာခံရင် အသတ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ ချိမ်းခြောက်မှုက အတော်ရုပ်ဆိုးတယ်။ ဒါ ဘင်လာဒင် တို့ရဲ့ တဖက်စွန်း အတွေးအခေါ်ပဲ။ ယုံသလား မယုံဖူးလား အဖြူအမဲပဲရှိတယ်။ ဒါတကယ်တော့ အိုင်ဒီယာလစ်ဇင် (Idealism) ပဲ။
ထို့နည်းတူစွာပဲ ဘင်လာဒင် တို့ကို သမ္မတ ကလင်တင် လက်ထက် အန္တရယ် လို့မမြင်ဖူး။ ဥပဒေ ချိုးဖေါက်သူ ရာဇ၀တ်သား လို့ပဲမြင်တယ်။ ဒါကြောင့် မိရင်ရုံးတင်စစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘင်တို့ က ရိုးရိုး ရာဇ၀တ်သားတွေ မဟုတ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကြံစည် နေကြတဲ့ အကြံသမား တွေ အကြမ်းဖက်သမားတွေ။ အမေရိကန်တွေ တွေဝေနေတာကိုကြည့်ပြီး ငပေါတွေပါလို့ သဘော ထားတာကြောင့် ပိုအတင့်ရဲလာတယ်။ ၉-၁၁ မှာ တာဝါနှစ်ခု လုံးပြိုကျမှ အိပ်ရာက လန့်နိုး လာကြ တယ်။ ဘုဒ်က ဘာသာရေးမှာတော့ ဘင်ကြီးနဲ့ နင်လားငါလားပဲ။ တိုင်းပြည် ၊ လူမျိုး နဲ့ ဘာသာ ကိုထိ လို့ကတော့ ဓါးကြည့်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး။ ဘင်တို့ကို ဥပဒေနဲ့ ဖြေရှင်းရမဲ့ ရာဇ၀တ်မှု လို့မမြင်တော့ဖူး ဒါစစ်ပွဲလို့မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရာဇ၀တ်မှုလွန်ကြူးမှဖမ်းဖို့ထက် တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓါးမဆိုင်း လိုက်ဖမ်းလိုက်သတ် တော့တာပဲ။ လိုအပ်ရင် ရေနှစ်ပြီး စစ်ဖို့အထိ ခွင့်ပြုလာခဲ့တယ်။
မှားတာ မှန်တာ အပထားလို့ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာထဲက နေ လက်တွေ့ မီးပုံထဲ ခုန်ချလိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဘင်လာဒင်တို့ အဖွဲ့ကို ဖြိုခွဲ နိူင်ခဲ့တာ။ အခုလည်း ဥရောပက စိတ်ကူးယဉ်သမား တွေက ဘင်လာဒင် ကိုသတ်တာမှန်ရဲ့လား ဆိုပြီး ဂျမန် စပီးဂာလ် မဂ္ဂဇင်းမှာ တင်ပြထားတယ်။ ဒီလူတွေ ဟာတကယ်တော့ လာတေးကော်ဖီလေးစုပ်လိုက် လက်ခြားကစီးကရက်လေးဖွာလိုက် မီးခိုးတွေကြားမှာ လူ့အခွင့်အရေးလေးတွေးလိုက် နဲ့ စိတ်ကိုအစားကြွေး ဦးဏှောက်ကို အလကား အလုပ်ပေးတမ်း ကစားနေကြ တဲ့ စိတ်ကူးယဉ် သမားတွေသက်သက်လို့ စာရေးသူက မြင်မိတယ်။
လောကမှာ အရှိကိုအရှိ အတိုင်းလက်ခံပြီး မိမိမြတ်နိုးရာ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်မလား ။ စိတ်ကူးယဉ် ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာတွေ ဖြစ်စေဖို့ စိတ်ကူးယဉ်မလား ဆိုတာကိုရွေးချယ်ရမှာပဲ။ Idealism နဲ့ Realism ကို ပြောချင်တာပါ။ အကြမ်းဖက် နည်းကိုရွေးတာနဲ့ Idealism အဟုတ်ဖူးလို့ မပြောနိုင်
၂၁ ရာစု နှစ်မှာ ၆ ရာစု အတွေးအခေါ်နဲ့ လာစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ချင်တာ စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ။ မာက်စ် ရဲ့ ယူတိုးပီးယား ဟာလည်း စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ပဲ။ လက်တွေ့ ပလင်မရှိပဲ ရန်-ငါ-စည်း အော်ကြ တာလည်း စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ပဲ။
လူငယ်လေးတွေ လက်တွေ့နဲ့ ပေါင်းပြီး တွေးခေါ်နိုင်ကြပါစေ
ချင်းမိုင် ဧပြီလ ၂၀၁၁ခု
Kill Bin Laden: A Delta Force by Dalton Fury
Jaw Breaker by Gary Bernsten
Wahhabism by Ayatullah Ja’far Subhani
Osama bin Laden killed: Leader of terrorist group al-Qaeda was 54 By Bradley Graham
Detective Work on Courier Led to Breakthrough on Bin Laden by By Mark Mazzetti and Helen Cooper
Osama bin Laden: how he evaded capture for so long by Jon Swaine
Osama bin Laden killed: little effect on day-to-day al-Qaeda By Malcolm Moore
One Unwary Phone Call Led US to Bin Laden Doorstep By ADAM GOLDMAN and MATT APUZZO Associated Press
Behind the Hunt for Bin Laden By Mark Mazzetti , Helen Cooper and Peter Baker
ဒီ ဆောင်းပါးက လူငယ်လေးတွေကိုသင်္ခမ်းစာ ယူစေချင်တာက ထောက်လှမ်းရေး အတွေးနဲ့ အသိပါပဲ။
ခေတ်အဆက်ဆက် ကျောင်းသားတွေဟာ စစ်အာဏါရှင်စံနစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ စိတ်ခံစား မှုကြောင့် ထလုပ်ကြပေမဲ့ မိမိတို့အနောက်မှာ စံနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမရှိဖူး ကွန်မြူနစ် တွေစီမှာပဲ မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိတယ်။ ကွန်မြူနစ် ဆိုတာကလည်း အရေး ကြုံလာရင် ကွန်မြူနစ် မဟုတ်သူတွေကို ထိုးကျွေးတာ အားလုံးအသိပဲ။ ဒါကြောင့် ခေတ်အဆက် ဆက် ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာလိုက် အဖမ်းခံ အညှင်းခံရပြီး အရှိန်သေ အဖျက်စီးခံလိုက်ကြရတာ ထောက်လှမ်းရေး ၁၀၁ အခြေခံ ကိုတောင် မကျွမ်းကြလို့ … မြင်မိတယ်။
ဘင်ကြီးတို့ က မေရိကန်တွေနဲ့အဆင့်မြင့် ထောက်လှမ်းရေး ပညာစမ်းကြတာ။ high tech high level ပေါ့။ ကျနော်တို့ဗမာတွေက low tech low level ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံ က တော့ အတူတူပါပဲ။
ပြေးသူနဲ့ လိုက်သူ ပဲပေါ့။
နောက်ခံ ယူဂျီ အဖွဲ့ရှိရင် တော့ ပြေးစရာရှိရင် ဘယ်ပြေးရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ မရှိရင် ဖြစ်လာရင် ကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့သူ အားကိုးသူတွေ စီပဲ ပြေးကြရတာပဲ။ မိတ်ဆွေ သို့ အမျိုးတွေပဲပေါ့ ဒီတော့ တောက်လှန်ရေးတွေက စောင့်နေရုံပဲ။ မျက်မှန်တင်ဦးတော်တယ်ဆိုတာက အင်စီအို တွေကို ရပ်ကွက်အပိုင်ပေးပြီး ကိုင်ခိုင်းထားတယ်။ ထူးရင်သတင်းပို့ ပြီးဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဥပဒေမရှိ ဖမ်းပြီး ရိုက်တော့ အစ တစ ရတာနဲ့ အတင်းနောက် က ဆွဲထုတ်လို့ရတာကိုး။
အသိ မရှိတော့ သတိ ရှိရမှန်းမသိ တော့ ထောက်လှမ်းရေးတွေအတွက် လွယ်သွားတာပေါ့
သတ္တိရှိတိုင်း မပြီး အသိ နဲ့ ဥါဏ်လည်း ရှိရမှာကိုး
သတိ ရှိ နိုင်ကြပါစေ။
ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာ ဂွင်းဆက် မရှိရင် မျက်စိကန်းသလိုပဲ
နောက်တခါ ပြေးမယ်ကြံရင် အားကိုးနိုင်သူကိုပဲ မျက်စိထဲမှာ မမြင်လိုက်နဲ့
ထောက်လှမ်းရေးကလည်း ဒီလိုပဲ တွေးမယ်ဆိုတာသိထားပါ
မထင်သူ မသိသူ ကို စဉ်းစားထားပါ
အပေါ်ကဆောင်းပါးကို . နည်းနည်း.ပြောရမယ်ဆိုရင်..
အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်.. ယူအက်စ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တွေ ဘတ်ဂျက်က.. ၈၀ဘီလီယံပါ..။
၉။၁၁ကြောင့် ၂ဆခုန်တက်သွားတယ် ပြောကြတယ်..။
ကျန်တာကတော့..ပြောစရာမရှိပါဘူး..။ လေ့လာနိုင်ရအောင် ကူးတင်ပေးလိုက်တာပါပဲ..။ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ထားတာက.. အညွှန်းတွေမပါဘူးလို့ထင်တယ်..။ အခုဟာက.. အီးမေးလ်ကရတာ..။